Ciidamada Kenya oo qabtay gaari siday walxaha qarxa & xiisad xasaasi ah oo ka dhalatay ka dib markii ciidamo reer Gedo ah is hor istaageen – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Kenya oo qabtay gaari siday walxaha qarxa & xiisad xasaasi ah...
Ciidamada Kenya oo qabtay gaari siday walxaha qarxa & xiisad xasaasi ah oo ka dhalatay ka dib markii ciidamo reer Gedo ah is hor istaageen
Ciidamada Kenya oo qabtay gaari siday walxaha qarxa, taas oo ay ka dhalatay xiisad xasaasi ah ka dib markii ciidamo ka tirsan dowladda ee ku sagnaa Gobolka Gedo ay is hortaageen.
Wararka aan ka heleyno degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xiisad u dhaxeysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Kenya ay ka taagan tahay degmadaasi.
Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Sahal Macalin Aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in xiisadda ay ka dambeysay kadib markii ciidamada dowladda ay ku qabteen magaalada gaari ay ka buuxan walxaha qarxa oo ka yimid Kenya.
Ciidamada Kenya iyo ciidamda Jubbaland oo isku dhinac ah ayaa iyagana sheegay in gaariga uu ka yimid Itoobiya soona galbiyeen ciidan beeleedka jooga Gedo loona waday Shabaab. Gaariga la qabtay aya waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada Kenya iyagoo qorsheynaya in maalmaha soo socda ay qarxiyaan dhammaan waxa saaran gaariga.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in xiisada iyo is qabqabsiga ay ka bilaabatay marka hore ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay ka dalbadeen inay siiyaan saldhig ay degaan ciidamada dowladda Soomaaliya, balse markii la siiyay kadib lagu amray inay isaga guuraan degmada Ceelwaaq.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada Kenya aysan dooneyn in ciidamada dowladda ay ku sugnaadaan saldhiga ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasina ay ka dhalatay xiisadda ka taagan degmada.Gudoomiye Sahal ayaa sheegay in Degmada Ceelwaaq ay qarka u saaran tahay in ay ku dagaalamaan Ciidamada Kenya ee la socda kuwa Maamulka Jubbaland oo dhinac ah iyo Ciidanka Dowladda ee Degmada Ku sugan.
Masuuliyadda xiisadda ka taagan degmada iyo waxyaabaha ka dhaca ayuu sheegay inay qaadayaan ciidamada dowladda Kenya ee kusugan degmada Ceelwaaq oo la saftay ciidamada Jubbaland.
Ciidamada Kenya ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay ka baxay saldhigyo militari oo ay ku lahaayeen qaybo kamid ah Gobolka Gedo, waxa ay sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan degmooyin kale oo katirsan Gobolka Gedo.
Previous articleWararkii Ugu Dambeeyay Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho+Sawiro